Zazavavy 13 taona no novonoina rehefa avy naolana. - Madagascar Informations
Zazavavy 13 taona no novonoina rehefa avy naolana.
17 octobre 2016 18 octobre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Miha mahazo vahana ny fanolanana ao Andramasina. Niaiky i Beloha sy ny namany 2 lahy fa nanolana sy namono nahafaty an’i Tsilavina tamin’ny fomba fomba feno habibiana.
Ny Alahady faha 9 ny volana octobre lasa teo no nitranga ny loza. Rehefa nandrasana ka tsy tonga tao an-trano i tsilavina io harivany Alahady io dia raikitra ny fitadiavany fianakaviana azy sy ny fokonolona. Rehefa lany haiky ireto farany dia nanapa-kevitra ny hitondra ny raharaha eny anivony mpitandro filaminana.
Nandray ny andraikiny avy hatrany ny mpitandro filaminana ka rehefa nitondrana alika dia nijanona nitokona tsy nety niala teo amin’ny Beloha ilay alika ka rehefa natao ny famotorana dia nanondro ny namany 2 hafa i Beloha.
Raha araka ny fitantarany dadatoany Tsilavina dia efa fomba fanaony Beloha izao ary efa nisy fianakaviana niharany herisetra tahaka izao tany aloha ka nitondra vohoka tsy fidiny noho ny hetraketrak’ireto farany.
Raha tsiahivina dia taminy fomba feno habibiana no namonoana an’ny Tsilavina satria sady nokendaina no naolana ary notapahana ny valahany.
Tsy nanaiky raraham-pihavanana ny fianakaviana, kanefa izy ireo indray amin’izao fotoana izao no hiharany fandrahonana fa tsy maintsy hanao valifaty ireo nahavanon-doza.
Ireto fianakaviana ireto ihany anefa no niharo ireo mpanolana raha saika niharany fitsaram-bahoaka izy ireo. Efa any Ambatolampy ireto jiolahy ireto amin’izao fotoana izao kanefa dia mandeha ny resaka fa 3 volana ihany izy ireo raha ela indrindra no mijanona any.
Tsy vao sambany no nahitana trangana fanolanana tahaka izao tany Andramasina fa efa fomba fanao ka tokony tsy handrihandry manan-draharaha ny tompon’andraikitra any an-toerana fa handray ny andraikitra manandrify azy avy hatrany.
← Famaranana ny atrikasan’ireo Loholon’i Madagasikara miaraka amin’i EISA.
Le WWF se mobilise avec la région Sava pour mieux appliquer le “dina” →
40 ans de scène d’Erick Manana
28 août 2017 Madagascar Informations 0
Notre culture : L’honorable présentation de condoléances
12 février 2018 Madagascar Informations 0